IMount Tomah-Huntington Cottage: ikhuselekile kwaye ingasese
Ifakwe kumgama wokuhamba ukusuka kwiiGadi zeBotanic kwindlela ezolileyo, engadlulanga, iHuntington Cottage ibekwe kwiihektare ezi-5 zegadi zomlingo ezinemithi emininzi, iintaka, iindlela kunye nokujonga. I-avareji ye-10°C yobushushu obusezantsi ehlotyeni, iMount Tomah yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphepha ubushushu behlobo. Iinyawo ezili-100 ngaphezulu komgca wekhephu naphakathi kwe-1 - 1.5 iiyure ukusuka kwi-metropolitan yaseSydney, le ndawo inayo yonke into yempelaveki efanelekileyo okanye iholideyi.
Baleka kukuphithizela kobomi njengoko uqhuba iNdlela ebukekayo yeeBells zeNdlela kwaye ungene kwelinye ilizwe njengoko unyukela emafini - ngokoqobo ... Kufuphi neendawo zokutyela, iikhefi kunye negadi yeziqhamo.
Amasango okhuseleko ombane anefreyimu ene-leighton eluhlaza kunye ne-agapanthus ziyakubulisa. Qhuba uye kumbono omangalisayo unqumle iintaba nangaphaya kweeGadi zeBotanic ecaleni kwendlela ebukekayo yegolide enemithi ye-topiary kunye ne-ambers elulwelo. Ikulungele ukukwamkela ekupheleni kwendlela, iHuntington Cottage ihleli ngoxolo phakathi kwemithi enamagqabi kunye neengoma zeentaka ezinikezela ngeendawo zokupaka ezigqunyiweyo zesithuthi sakho.
Ngeveranda enkulu yokwandisa amava akho entaba, ngaphakathi uya kufumana iindawo zokuhlala eziphangaleleyo, indawo yomlilo esembindini, umva-umjikelo womoya womoya kunye nefenitshala ephucukileyo kodwa ekhululekileyo. Amagumbi okulala amabini anesisa, (inkosi e-1 kunye nokumkanikazi omnye) igumbi lokuhlambela elikhulu elineentloko ezimbini zeshawari, indawo yokuhlamba impahla kunye nekhitshi eligcweleyo elinaso sonke isixhobo kunye nempahla oya kuyidinga kubandakanya nomatshini wekofu ubaluleke kakhulu. Unikezelo olungapheliyo lwamanzi endalo ahlaziyekileyo asentabeni anikezela yonke impompo kunye neshawari. Ekufuneka uze nayo nguwe...
Thatha uhambo oluya kwimbali kunye nenhle iNtaba iWilson okanye uqhubela phambili ukuya eLithgow okanye eBell apho unokuwela khona uye kwiindawo ezidumileyo zabakhenkethi kwiiNtaba zeBlue ezinje ngooSista abathathu, iKatoomba kunye neLeura. Kungenjalo, thatha uhambo olupholileyo nje umganyana wokuhla entabeni ukuze uphonononge iintlobo ngeentlobo zezityalo ezibandakanya 'zikhethela ngokwakho', iindawo zokutyela ezisemgangathweni ezibandakanya 'iBilpin Afire' (eyayisakuba yiApple Bar), iikhefi kunye neevenkile ezisecaleni kwendlela. Kukho ezinye izinto ezothusayo kumhloli oqwalaselayo! Yiya etyholweni ehlotyeni okanye uhambe nje uhambe phantsi kwesitrato sethu esizolileyo.
Gqibezela usuku lwakho ngebarbeque kunye nokutya kwangaphandle ngeglasi yewayini, okanye ibhiya ebandayo kwaye ubukele inkungu ingena njengoko ilanga litshona.
Sithanda ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo obupheleleyo, ngoko awunokwazi ukusibona kwaphela. Ngamanye amaxesha siye sityelele enye indawo yokuhlala kule ndawo. Siyavuya ukuthi molo ukuba ungathanda ukudibana nathi kodwa kungenjalo unokuqiniseka ngemfihlo yakho.
Sithanda ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo obupheleleyo, ngoko awunokwazi ukusibona kwaphela. Ngamanye amaxesha siye sityelele enye indawo yokuhlala kule ndawo. Siyavuya ukuthi mo…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-2335
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mount Tomah